Bozankayataraamyada ay soo saartey Turkey waxay calaamado buuxa ka heshay muwaadiniinta | RayHaber | raillynews
HometareenkaBozankayaoo ay soo saarteen taraamyada maxalliga ahi waxay calaamado buuxa ka heleen muwaadiniinta
22 / 09 / 2016 tareenka, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, TURKEY, taraamka
BozankayaTaraamyada maxalliga ah ee ay magaaladu soo saartay ayaa ka helay calaamado buuxa muwaadiniinta: Bozankaya Shirkadda oo gabi ahaanba ay sameeyeen injineerada Turkiga, boqolkiiba 100 gawaarida nidaamka tareenka gudaha waxay heleen calaamado buuxa shacabka. Gawaarida cusubi waxay soo jiitaan raaxo, amaan iyo muuqaalkooda.
Qeyb ka mid ah gawaarida nidaamka cusub ee tareenka ee 42, oo ay Dawladda Hoose ee Magaaladda ay maalgelisay ku dhawaad ​​30 milyan oo Yuuro, ayaa bilaabay duulimaadyadeedii. Bozankaya'Trams S ayaa la soo saaray ee Ankara, iyadoo awoodda ugu sarraysa rakaabka ee Turkey. Isla mar ahaantaana kharashka gadashada ee Turkey qaadeen ilaa iyo haatan in muhiimadda ay leedahay in ay mashruuca taraamka haboon ugu.
Native in Europe
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay horey u siin jirtay gawaarida nidaamka tareenka shirkadaha soo saarayaasha Yurub. Horumarinta khadka tareenka ee Kayseri, oo loogu talagalay soo iibsashada gawaarida cusub Bozankayataraafikada maxalliga ah ee la doorbido. Naqshadeyso oo wax soo saar gebi ahaanba Bozankaya Tareenka, oo ay ku garteen Injineerada Turkiga gudaha dhismaha, ayaa ah gaadiid gaadiid casri ah oo aad u sareeya.
Imtixaanka tijaabada ah Maajo
Qaar ka mid ah gawaarida, oo si buuxda looga dhisay Turkiga, ayaa bishii May lagu sameeyey 1 imtixaannada bishii. Tareenada cusubi waxay hadda ku jiraan lineka Cumhuriyet Square-Talas.
Muwaadiniinta isticmaalaya nidaamka nidaamka tareenka cusub wuxuu aad ugu qanacsan yahay adeegga iyo raaxada. Muwaadiniinta oo sheegaya in gudaha gudaha uu ka yaryahay gaadiidka hore, wuxuu uga mahadceliyey Dawladda Hoose ee Metropolitan.
Faa'iido leh dhinac kasta
Bozankaya'S soo saarka gudaha ee taraamka low-sagxada ee mitir 33 dheer iyo labada-dhinac, Turkey ayaa kala soocin ah in gaariga oo leh awood ugu sareeya ee rakaabka ee ay qeybta. Bozankayawaxaa soo saaray taraamka, dadka 66 oo ku fadhiya meel ballaadhan oo waasac ah, oo leh awood rakaab sare oo wadarta guud ee dadka 392. Iyada oo leh lix albaab oo labada dhinac ah iyo isugeyn ah albaabada 12, albaabadaas waxaa loo adeegsan karaa raacitaanka rakaabka degdega ah iyo soo dejinta. Iyada oo la adeegsanayo faleeboyinka dhabta ah ee borooyinka, kharashyada dayactirka oo yar iyo fududeynta dayactirka ayaa la bixiyaa. Intaa waxaa u dheer, hufnaanta sare iyo joogtaynta waxaa lagu bixiyaa iyadoo la adeegsanayo qalab kala wareege ah. Marka lagu daro qiimaha iibsashada habboon, soosaarka gudaha waxaa sidoo kale la siiyaa faa iidooyin ay ka mid yihiin bixinta alaabada firaaqada ah iyo adeegga qiimo jaban iyo waqti yar.
BozankayaBoqolkiiba boqol Guryaha Guryaha ee Eurasia Tareenka 2017 Carwo
BozankayaWaxaa soo saaray baska korantada oo la soo bandhigay
Bozankayataraamka ugu horeeya ee guriga diyaar u ah soosaarka
BozankayaTareenka ugu horreeya ayaa laga soo saaray Kayseri oo ku taal Kayseri
guuro rail caadi ka Russia iyo Turkey